Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Almancax
Sida www.almancax.com boggayaga ayaa ixtiraamaya xuquuqdaada gaarka ah waxaanan ku dadaaleynaa sidii aan u hubin laheyn inta lagu jiro wakhtigaaga boggayaga. Sharaxaadda amniga macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ayaa hoos lagu sharaxay laguna siiyay macluumaadkaaga.
Sida websaydhyo badan oo internetka ah, www.almancax.com waxay kaydisaa faylasha kaydka ujeedooyinka tirakoobka. Faylashaasi waa; cinwaankaaga IP, bixiyaha adeegga internetka, sifooyinka khariidadaada, nidaamka hawlgalkaaga, iyo boggagaaga ku yaal / soo-saarista ee goobta. Galka faylasha waa mid si qarsoodi ah ujeedo aan lahayn tirakoob oo aan ku xad gudbin sirtaada. Cinwaankaaga iyo macluumaadka kale ma aha mid la xiriira macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed.
Waxaa laga yaabaa inaan ku socono xayeysiisyada shirkadaha qaarkood boggayaga (Google, iwm). Xayeysiisyadaasi waxay ku jiri karaan cookies iyo cookies waa laga soo ururin karaa shirkadan, mana awoodno inaan helno macluumaadkan.
www.almancax.com waxay isticmaashaa nidaamka xayeysiiska Google Adsense. Nidaamkan waxaa isticmaala Google ee loogu talagalay xayeysiisyada ku shaqeeya boggaga daabacaadda ee soo bandhigaya AdSense ee xayeysiiska content. DoubleClick cookie Waxaa ku jira.
Sida iibiye saddexaad, Google wuxuu adeegsadaa cookies si loogu adeego xayeysiiska bartayada. Adoo adeegsanaya kukisyadan, isticmaaleyaasheennu waxay u adeegaan xayeysiis ku saleysan booqashooyinka ay ku leeyihiin bartayada iyo bogagga kale ee internetka.
Users Nidaamka Google iyo nidaamka shakhsiyeed ee arimaha gaarka ah waxaad ka hortagi kartaa isticmaalka qadarka DART adigoo booqanaya. Google waxay isticmaashaa shirkadaha xayeysiiska shirkadaha sadexaad si ay u bixiyaan adeegyo xayeysi ah waqti marka ay soo booqdaan boggayaga. Shirkadaha noocan ah ayaa laga yaabaa inay isticmaalaan xayeysiintaada si ay u soo saaraan badeecadaha iyo adeegyada aad danaynaysid (sida magacaaga, cinwaankaaga, cinwaankaaga emailkaaga, ama lambarka telefoonka) ee aad ka hesho booqashooyinka boggaan iyo bogag kale. Si aad u baratid arjigaan iyo si aad u ogaato waxa xulashooyinkaagu yihiin si looga hortago isticmaalka macluumaadka noocaas ah shirkadahaas iyo macluumaad dheeraad ah NAI Mabaadiida Is-Beddelka ee daabacayaasha Waxaad isticmaali kartaa lifaaqa A ee dukumintiga (PDF).
Ereyga "Cookie - Cookie" waxaa loo isticmaalaa in lagu sharaxo feylal qoraal yar oo server-ka websaydhka ahi ku dhejiyo diskiga adag ee kombiyuutarkaaga. Qeybo ka mid ah boggayaga ayaa isticmaali kara cookies si ay u siiso adeegsade ku habboon. Intaas waxaa sii dheer, buskudka iyo aaladaha internetka ayaa loo isticmaali karaa in lagu ururiyo xogta xayeysiinta iyada oo loo marayo xayeysiinta laga heli karo goobta. Tan waxaa lagu dhammeeyaa ogolaanshahaaga, waana suurtagal in laga hortago tan adoo beddelaya dejiyaha biraawsarkaaga markii aad codsato.
Websaytka almancax.com waxay ku xiran yihiin cinwaannada internetka kala duwan ee bogagga. almancax.com kama masuul aha waxyaabaha ku jira boggaga aad ku xiran tahay, dhiirrigelinta banner, ama mabaadii'da asturnaanta. Nidaamka isku xirka ee halkan lagu tilmaamayo waxaa si sharci ah loo tixgelinayaa inuu yahay "xatooyo".
la xiriira siyaasadda asturnaanta ee la hirgeliyay ee goobta almancax.com; waxaad soo gudbin kartaa su'aalo, fikrado iyo fikrado naga almancax [at] gmail.com.